13 Nea Yehowa aka akyerɛ me ni: “Kɔ na kɔpɛ nwera abɔso, na fa bɔ w’asen, nso mfa nka nsu.” 2 Ɛnna midii Yehowa asɛm no so kɔpɛɛ abɔso, na mede bɔɔ m’asen. 3 Na Yehowa asɛm baa me nkyɛn ne mprenu so sɛ: 4 “Fa abɔso a wunyae a ɛbɔ w’asen no, na sɔre kɔ Eufrate+ ho fa kohintaw ɔbotan tokuru mu.” 5 Enti mekɔe, na mede kohintaw Eufrate ho sɛnea Yehowa hyɛɛ me no. 6 Na nna pii akyi no, Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: “Sɔre kɔ Eufrate ho, na kɔfa abɔso a mehyɛɛ wo sɛ fa kohintaw hɔ no bra.” 7 Ɛnna mekɔɔ Eufrate ho kotutu yii abɔso no fii baabi a mede kohintawee no, na hwɛ! na abɔso no asɛe a wɔde yɛ hwee a ɛnyɛ yiye. 8 Ɛnna Yehowa asɛm baa me nkyɛn sɛ: 9 “Nea Yehowa aka ni, ‘Saa na mɛsɛe Yuda ahantan+ ne Yerusalem ahantan dodow no. 10 Saa ɔman bɔne a wɔmpɛ sɛ wotie me nsɛm yi,+ wɔnam wɔn koma atuatew+ mu akodi anyame foforo akyi sɛ wɔbɛsom wɔn akotow wɔn.+ Wɔn nso bɛyɛ sɛ abɔso a wɔde yɛ hwee a ɛnyɛ yiye yi.’ 11 ‘Sɛnea onipa bɔ abɔso ma ɛfam n’asen no, saa na mede Israel fie nyinaa ne Yuda fie nyinaa fam me ho,’+ Yehowa asɛm ni, ‘sɛ wɔnyɛ me man+ ne m’anuonyam din+ ne m’ayeyi ne m’ahoɔfɛ, nanso wɔantie.’+ 12 “Na ka asɛm yi kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni: “Ahina de, wɔde nsã na ɛhyɛ no mã.”’+ Na wɔn nso bɛka akyerɛ wo sɛ, ‘Yɛn de, yennim sɛ nsã na wɔde hyɛ ahina mã anaa?’ 13 Afei ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ, asase yi sofo nyinaa ne ahene a wɔte Dawid agua+ so ne asɔfo ne adiyifo ne Yerusalemfo nyinaa, mɛma wɔabobow titãã.+ 14 Agyanom ne mma, mɛkeka wɔn nyinaa ti abobom,”+ Yehowa asɛm ni. “Me yam renhyehye me, na ɛrenyɛ me awerɛhow, na merenhu mmɔbɔ sɛ meresɛe wɔn.”’+ 15 “Muntie na monyɛ aso. Monnyɛ ahantan,+ na Yehowa na wakasa.+ 16 Monhyɛ Yehowa mo Nyankopɔn anuonyam+ ansa na wama esum aba,+ ansa na mo nan apempem mu wɔ mmepɔw so adesae.+ Na mobɛhwɛ hann kwan,+ nanso ɔbɛma adan sunsuma;+ ɔbɛdan no esum kabii.+ 17 Sɛ moantie a,+ mo ahantan no nti, me kra besu ahintawee mu na atew nusu;+ Yehowa nguankuw a wɔafa wɔn nnommum nti,+ nusu bɛsen afi m’aniwam. 18 “Ka kyerɛ ɔhene ne ɔhemmaa sɛ,+ ‘Montena fam,+ efisɛ mo abotiri fɛfɛ no befi mo ti atɔ fam.’+ 19 Wɔatoto anafo nkurow mu, na obiara nni hɔ a obebue. Wɔde Yuda nyinaa kɔ nkoasom mu. Wɔde wɔn kɔ nkoasom mu korakora.+ 20 “Ma w’ani so na hwɛ wɔn a wofi atifi fam reba no.+ Nguankuw a wɔde maa wo no, wo nguankuw fɛfɛ no, ɛhe na wɔwɔ?+ 21 Sɛ wɔn a mfiase no wo ne wɔn dii atirimsɛm, na wokyerɛkyerɛɛ wɔn no dan ba wo so a,+ dɛn na wobɛka?+ Anka awoko yaw renkyere wo sɛ ɔbea a awo aka no anaa?+ 22 Na sɛ woka wo komam sɛ,+ ‘Dɛn nti na eyi nyinaa aba me so?’+ a, hu sɛ wo bɔne dodow nti na wɔapa wo ho ntama;+ ɛno nti na wɔahyɛ wo nantin brɛ no. 23 “Kusni+ betumi asesa ne honam? Ɔsebɔ nso betumi asesa ne ho nworanworan no?+ Ɛnde anka mo nso mubetumi ayɛ papa, mo a wɔakyerɛkyerɛ mo bɔneyɛ no.+ 24 Enti mɛbɔ wɔn ahwete+ sɛ ntɛtɛwa a sare so mframa huw kɔ.+ 25 Wo kyɛfa ni, wo kyɛfa a masusuw ama wo,”+ Yehowa asɛm ni, “efisɛ wo werɛ afi me,+ na nkontompo na wode wo ho ato so.+ 26 Enti meyi wo ntama abua w’anim, na wɔahu w’animguase:+ 27 w’awaresɛe+ ne wo nteɛm,+ w’ahohwi ne w’aguamammɔ. Nkoko so ne wuram nyinaa, mahu w’atantanne no.+ O Yerusalem, due! Wo ho ntumi ntew+—ɛbɛkɔ so akosi da bɛn?”+